China Cationic polyester spandex mélange ijezi Indwangu abakhiqizi nabaphakeli |Huasheng
Indlela emibili yokwelula.Ukuthinta okuthambile.Imithende ye-Mélange.
I-Moisture Wicking, I-Anti-Bacterial/Anti-microbial, Ukupholisa, Okugaywe kabusha
Le ndwangu yejezi ye-cationic polyester spandex mélange, inombolo yethu ye-athikili ethi FTT-WB180, yalukwe nge-9% spandex (elastane), 62% i-polyester kanye ne-19% ye-cationic.
Indwangu yejezi ye-cationic polyester spandex mélange luniwe ngengxube yemicu edayiwe ngokuphambana ukudala umphumela oshisayo.Indwangu yejezi le-mélange ihlanganisa ama-shades amaningi ampunga noma ampunga anomunye umbala.Kukhona imibala elandelayo ye-heather etholakalayo yendwangu yethu yejezi le-mélange okwamanje.
Upinki/Onsomi, Upinki Oshisayo/I-Fuchsia, iTurquoise/Royal, iRozi/Ensundu,
Okumpunga/Mnyama, Iwayini/Mnyama, Okunsomi/Mnyama, Ikhorali/Mnyama, nedenim/Mnyama
Imithi yokwelapha efana ne-wicking yomswakama, i-anti-microbial kanye nokupholisa iyatholakala.Futhi singasebenzisa intambo ye-polyester egaywe kabusha kule ndwangu yejezi le-mélange ukuze sivikele kangcono umhlaba.
Le ndwangu yejezi ye-cationic polyester spandex mélange inhle kakhulu kuma-leggings, izifudumezi zemilenze, izikhindi zezemidlalo, izingubo zangaphansi, obhodisi bezemidlalo.Izosusa umswakama emzimbeni futhi imelane nokumuncwa kwephunga.Le ndwangu yejezi le-mélange izogcina yomile futhi inganuki phakathi nomsebenzi womzimba womuntu oligqokile.Kuntofontofo ngokwedlulele ukugqoka.
Ukuze kuhlangatshezwane nezindinganiso eziqinile zekhwalithi zamakhasimende, lezi zindwangu zejezi le-mélange zikhiqizwa imishini yethu yokuluka eyindilinga ethuthukisiwe eyethulwe evela eYurophu.Umshini wokweluka osesimweni esihle uzoqinisekisa ukunitha okuhle, ukunwebeka okuhle, nokuthungwa okucacile.Abasebenzi bethu abanokuhlangenwe nakho bazozinakekela kahle lezi zindwangu zejezi le-mélange kusukela ku-greige eyodwa kuya kokuqeda eyodwa.Ukukhiqizwa kwazo zonke izindwangu zejezi le-mélange kuzolandela izinqubo eziqinile ukuze kwanelise amakhasimende ethu ahlonishwayo.
I-Huasheng isebenzisa imicu yekhwalithi ephezulu ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kanye nekhwalithi yezindwangu zethu ze-mélange ezinwebekayo zidlula izindinganiso zemboni yamazwe ngamazwe.
Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile ukuze kuqinisekiswe ukuthi izinga lokusebenzisa izindwangu ze-mélange likhulu kuno-95%.
Idizayini eqinile nethimba lezobuchwepheshe elinesipiliyoni seminyaka yendwangu esezingeni eliphezulu, ukuklama, ukukhiqiza, nokumaketha.
U-Huasheng wethula uchungechunge olusha lwezindwangu ezinwebekayo ze-mélange nyanga zonke.
I-Huasheng ihlose ukuqhubeka nokudala inani eliphezulu lamakhasimende.Asigcini nje ngokuhlinzeka ngezindwangu zethu ze-mélange ezinwebekayo kumakhasimende ethu, kodwa futhi sinikeza isevisi enhle kakhulu nesixazululo.
Ngolwazi lweminyaka engu-16 lwezindwangu zejezi ezinwetshiwe, u-Huasheng usesebenzele amaklayenti amazwe angama-40 emhlabeni jikelele.
Intengo yokuthengisa eqondile yasefekthri, akekho umsabalalisi ozuza umehluko wentengo.
Okwedlule: U-Heather Jersey ubophe indwangu enwetshiwe ye-mélange
Olandelayo: UMélange wabhulasha indwangu yaseJersey
Indwangu ye-Blue Melange
Indwangu Empunga Ekhanyayo ye-Melange
Indwangu ye-Melange Effect
Indwangu ye-Melange Jersey
Imfashini ye-melange polyester spandex stretch j...
Ijezi le-polyester ne-spandex elipholisa i-melange...
Ijezi elilodwa le-polyester spandex...
Inayiloni i-polyester ne-spandex high stretch melang...